Vaovao - Nanjary mpamokatra akanjo sy mpanondrana akanjo lehibe indrindra eran-tany i Sina
Hatramin'ny naha-niditra an'i WTO an'i Shina dia nanjary ampahany lehibe amin'ny fanondranana entana any Shina ny lamba sy ny fitafiana. Tao anatin'ny folo taona lasa, niaraka tamin'ny fanafoanana tsimoramora ny rafitra quota fanondranana, ny akanjon'i Shina, ny lamba ary ny fanondranana akanjo dia manana tontolo ivelany somary malalaka. Ny zava-misy eo amin'ny tontolo iainana tsara dia manome ny fepetra fototra indrindra amin'ny fanatontoloana ny indostrian'ny fitafiana any Shina. Noho io antony io, ny indostrian'ny lamba sy ny fitafiana any Shina miaraka amin'ny vidin'ny asa sy ny tombony ho an'ny famatsiana akora dia manatsara hatrany ny fifaninanana iraisam-pirenena. Hatramin'ny nidiran'i Shina tamin'ny WTO tamin'ny taona 2001, ny haben'ny fanondranana ireo vokatra vita amin'ny lamba sy akanjo any Sina dia nitombo avo efatra heny. Amin'izao fotoana izao dia lasa mpamokatra akanjo sy mpanondrana akanjo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao i Shina.
Araka ny angon-drakitra, ny taona 2019, ny totalin'ny fanondranana lamba sy fitafiana an'i Shina dia $ 271,836 miliara, fihenan'ny 1,9% isan-taona. Anisan'izany, ny totalin'ny fanondranana lamba dia US $ 120.269 miliara, tafakatra 0,91% isan-taona. Ny fanondranana akanjo dia mitentina US $ 151.367 miliara, nihena 4,00% isan-taona. Ny firenena mpanondrana lamba sy fitafiana lehibe indrindra dia Japon sy Sina.
Raha ny fahitana ny firafitry ny entam-barotra fanondranana, ny fanondranana fitafiana tamin'ny taona 2019 dia nanangona 151.367 miliara dolara amerikana, ka ny fitafiana fanaovana akanjo dia 60,6 miliara dolara amerikana, fihenan'ny 3,37% isan-taona; ny akanjo tenona dia 64,047 miliara dolara amerikana, fihenan'ny 6,69% ​​isan-taona.
Cao Jiachang, filohan'ny Antenimieran'ny varotra Textile Import sy Export, dia nilaza tamin'ny "Forum International International Textile China 8 sy Asia" natao tany Shanghai tato ho ato, ny fanondranana sarontava sy ny akanjo fiarovana dia nitombo haingana, izay nahatonga ny fitomboan'ny fanondranana. ny lamba sy ny fitafiana. Na izany aza, kamo ny tsena iraisampirenena, matotra ny fanafoanana sy fanemorana ny baiko vita amin'ny lamba sy ny lamba mahazatra, miadana ny famerenana ireo baiko vaovao ary tsy azo antoka ny fanantenana amin'ny ho avy。 Mandritra ny fotoana ho avy, manondrana lamba hafa noho ny fitaovana fisorohana valanaretina dia mbola hiatrika ny toe-javatra ratsy amin'ny fihenan'ny fangatahana sy ny tsy fisian'ny baiko.
Hatramin'ny telovolana faharoa tamin'ity taona ity dia nihatsara tsikelikely avy tao am-bala ny fanondranana lamba sy fitafiana any Sina. Natosiky ny fanondranana ireo fitaovana fanoherana ny valanaretina toy ny sarontava, nanomboka ny volana Janoary ka hatramin'ny Aogositra, ny fanondranana lamba sy fitafiana avy any Shina dia mitentina 187,41 lavitrisa dolara amerikana, fitomboana 8,1%, ka ny fanondranana lamba dia 104,8 tapitrisa dolara amerikana, fiakarana 33,4%; ary ny fanondranana akanjo dia US $ 82.61 miliara, fihenan'ny 12,9%.
Ny fanondranana fitaovana fisorohana valanaretina toy ny sarontava sy fitafiana miaro dia nitombo be. Araka ny voalazan'i Cao Jiachang dia nanondrana sarontava 151,5 miliara sy akanjo fiarovana 1,4 miliara i China tamin'ny 15 martsa ka hatramin'ny 6 septambra, miaraka amin'ny fanondranana sarontava manodidina ny 1 miliara isan'andro, izay manohana mafy ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny valan'aretina eran-tany. Tao anatin'ny fito volana voalohany tamin'ity taona ity, ny totalin'ny fanondranana sarontava sy fitafiana miaro an'i China dia efa ho 40 miliara dolara amerikana ary 7 miliara dolara amerikana, izay nitombo 10 heny noho ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa. Ankoatr'izay, ny fanondranana lamba tsy tenona sy lamba tsy tenona dia nitombo 118%, izay misy ifandraisany amin'ny fitomboan'ny fanondranana lamba tsy tenona ihany koa.